Taariikh nololeedkii AUN Maxamed Khalaf Aaden (Shoongale) |
Tuesday, July 8th, 2014 Taariikh nololeedkii AUN Maxamed Khalaf Aaden (Shoongale)
Maxamed Khalaf Aaden (Shangole)
Waxaa magaaladda Muqdisho ku geeriyooday Maxamed Khalaf Aadan (Shoongole) oo ahaa Khabiir isboorti islamarkaana moqday kabtanii ugu horeeyay ee Xulka Qaranka Soomaaliya ee kubadda Cagta ah uu yeesho sanadii 1953-dii, iyadoo xiligaasi dadku ku ciyaari jireen caga-cadaan oo aysan aqoonin kabaha hadda la xirto.
Shangole waxaa laga xasuustaa Fir-fircoonidii uu ku dhex lahaa Isboortiga Soomaaliya, wuxuuna muddo dheer ahaa Xubin katirsan gudiga Olombikadda Soomaaliyeed, meelo badan oo dalka ah ayuu kasoo noqday Gudoomiyaha Gudiga Olombikadda oo ay kamid tahay gobolka Shabeelaha Dhexe.
Maxamed Khalaf Aadan (Shoongole) wuxuu dhashay sanadii 1934tii, isagoo ku dhintay da’da 80 sano jir.
Marxuum Shoongole wuxuu ahaa Halyay Isboorti, wuxuu ahaa aabihii isboortiga Soomaaliya, wuxuu ahaa nin qaran oo ka hufan qabyaalad, waxaa lagu xasuustaa nin ay dadka oo dhami u sima yihiin naxariisna badan.
Shoongole wuxuu ahaa nin ay u yaqaanaan dadka isborrtigu halyay, waxaa u dheerayd inuu ahaa nin ay ku dheer tahay wadaniyad jacaylka aadna u nibcaa qabyaaladda. Wuxuu ifka kaga tagay dad gaaraya 50 qof oo isugu jira wuxuu dhalay iyo waxay sii dhaleen.
Maantay ayaa lagu aasayaa magaaladda Muqdisho, waxaana ka qayb geli doonaa aaskiisa masuuliyiin katirsan xirrirka soomaaliyeed ee kubadda cagta iyo gudiga olombikadda soomaaliyeed.
Allaha u Naxariisto Marxuum Maxamed Khalaf Aaden (Shoongole).
3 Responses for “Taariikh nololeedkii AUN Maxamed Khalaf Aaden (Shoongale)”
Abuu Najma Hassan says:	July 8, 2014 at 12:45 pm	allaha u naxariisto
yusuf daahir says:	July 8, 2014 at 6:24 pm	allaa yaa raxma qabriga allaha u nuuriyo suaashana allaha u dhib yareeyo ehelkiina ilahay haka samir siiyo
Eng. Barre says:	July 8, 2014 at 8:08 pm	Inaa Lilaahi wa-inaa Ileehi raacjicuun. Waxaan Tacsi u dirayaa dhammaan Eheladii uu ka geeriyooday Marxuum Maxamed Khalaf Aadan (Shoongole), oo taariikh weyn ku lahaa shacabka Soomaaliyeed, waxaana Eebbe uga rajaynayaa in uu ugu bishaareeyo Jannadii Fardowsa, Sidoo kale uu Samir iyo iimaan ka siiyo dhammaan Ehelladiisa, Qaraabadiisa, Asxaabtiisa, intii aqoon u lahayd iyo bulshada Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan. Waxaa Tacsidaan soo Gudbinaya dhammaan Familka Reer Barre – Ba-bad, oo kala jooga London (UK), Holland, USA iyo Soomaaliya, gaar ahaan Eng. A.Barre, Aamin
Madaxweyne Gaas oo Dib ugu soo laabtay Garoowe ka dib safar uu ku tagay Magaalada Boosaaso (Sawiro)
26 January,2015 at 15:50:04 / No comment Duqa Gaalkacyo ee Puntland oo shacabka ogeysiiyay bilaabashada Mashaariic la xiriira horumarinta